» Symantec Endpoint ပရိုတက်ရှင်း (client) နဲ့ Symantec Endpoint ပရိုတက်ရှင်း မန်နေဂျာ (server) ချိတ်လား မချိတ်လား သိချင်ရင် Symantec Endpoint ပရိုတက်ရှင်း တင်ထားတဲ့ client ရဲ့ Internet Browser မှာ http://ဆာဗာလိပ်စာ-or-ip-address/secars/secars?hello,secars ရိုက်ထည့်ပြီး enter နှိပ်လိုက်ပါ... OK. လို့ပြန်ပြရင် ဆာဗာနဲ့ client ချိတ်ဆက်မှု ရှိတယ်...
» Symantec Endpoint ပရိုတက်ရှင်းမှာ definition update လုပ်မယ်ဆိုရင် http://www.symantec.com/business/security_response/definitions/download/detail.jsp?gid=savce က .jdb ဖိုင်ကို download လုပ်ပြီး C:\_Program Files\_Symantec\_Symantec Endpoint Protection Manager\_data\_inbox\_content\_incoming အောက် ထည့်လိုက်တာနဲ့ ဆာဗာနဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့ client တွေမှာမှာ definition update လိုက်ဖြစ်သွားတယ်...
» Symantec Antivirus Corporate Server မှာ definition update လုပ်မယ်ဆိုရင် အပေါ် URL ထဲက .xdb ဖိုင်ကို download လုပ်ပြီး C:\_Program Files\_Symantec AntiVirus အောက် ထည့်လိုက်တာနဲ့ ဆာဗာနဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့ client တွေမှာမှာ definition update လိုက်ဖြစ်သွားတယ်...
My Labels: AntiVirus, IT Tips and Tricks, server, clients
အခုသုံးနေတဲ့ ကလိုင်းယင့်က ဆာဗာနဲ့ မချိတ်နိုင်တဲ့ ပြင်ပ တစ်နေရာကို ရောက်နေလို့ အပ်ပ်ဒိတ် မဖြစ်ပါ ဆိုပြီး အလာ့တ် လာပြနေတယ်။ လိုက်ဖ်အပ်ဒိတ်လုပ်လဲ မထူးဘူးဗျ။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီအလာ့တ်တက်နေတုန်း ကိုမောင်လှ ပို့စ်တက်လာတယ်ဗျာ။
http://www.symantec.com/business/security_response/definitions/download/detail.jsp?gid=savce ကနေ သက်ဆိုင်ရာ ဖိုင်ကို download လုပ်ပြီး definition ကို update လုပ်ကြည့်ပါဦး... ကျတော်တို့ ပြည်တွင်းမှာ Live Update မရတော့ ဒီလိုပဲ update လုပ်နေရတာ...
But I don't have any clients.
Pyae Wut Hmone said…
blog ကို link ထားချင်လို့ ခွင့်ပြုပါနော်